Nhau - chii chinonzi 9BB solar panels
Mumusika uchangopfuura, unonzwa vanhu vachitaura nezve 5BB, 9BB, M6 mhando 166mm maseru ezuva, uye hafu akacheka maseru ezuva. Unogona kuvhiringidzika neaya mazwi ese, ndeapi? Chii chavanomira? Ndeupi musiyano uripo pakati pavo? Muchikamu chino, isu ticha tsanangura muchidimbu pfungwa yese yataurwa pamusoro.
Chii chinonzi 5BB uye 9BB?
5BB zvinoreva mashanu mabara mabara, aya ndiwo mabhaidhi esirivha ari ekudhinda pascreen pamberi pechiso chezuva rezuva. Mabhawa emabhazi akagadzirwa se conductor anotora magetsi. Iyo nhamba uye upamhi hwebhazi bhawa zvinonyanya zvichienderana nesaizi saizi uye kugadzirwa kwakarongeka. Tichifunga zvakaringana mamiriro uye nedzidziso, the kuwedzera kwemabhazi mabara, kuwedzera kwekuita. Nekudaro, mukushandisa chaiko, zvinonetsa kuwana yakanakisa poindi inoenzanisira hupamhi hwebhazi bhazi uye kudzikisira mumvuri wezuva. Enzanisa nemasero e5BB ane saizi yakajairwa 156.75mm kana 158.75mm, 9BB maseru anowedzera mumazariro ese ari maviri uye saizi yesero inova 166mm kazhinji kazhinji, kunze kwekuti, 9BB inoshandisa denderedzwa rekuwisira mutsara kuti udzikise mumvuri. Nemaitiro ese matsva akavandudzwa aya, 166mm 9BB maseru ezuva anowedzera zvakanyanya kubuda kwekuita.
Chii chinonzi hafu yakatemwa maseru ezuva maseru?
Kana tikacheka saizi izere rezuva rezuva kuita hafu kuburikidza nemuchina wekucheresa laser, tichiwisira maseru ese hafu mu tambo nhevedzano wiring maviri akateedzana, pakupedzisira tichiaputira seyadhi rimwe rezuva. Ramba wakafanana nesimba, iyo yakazara sero yekutanga ampere yakakamurwa nepaviri, kuramba kwemagetsi kwakafanana, uye kurasikirwa kwemukati kwakaderedzwa kusvika 1/4. Zvese izvi zvinhu zvinopa kuvandudza pane zvese zvinobuda.
Ndezvipi zvakanakira 166mm 9BB uye hafu maseru ezuva mapaneru?
1: Hafu yesero zvinehunyanzvi inovandudza simba remaseru ezuva kusvika panosvika 5-10w.
2: Iine iyo yekuvandudza mukuburitsa kugona, iyo yekumisikidza nzvimbo yakaderera ne3%, uye iyo yekumisikidza mutengo yakaderera ne6%.
3: Hafu maseru maitiro anoderedza njodzi dzekutsemuka kwemasero uye kukuvara kwemabhawa, nekudaro kuwedzera kugadzikana uye kuvimbika kwezuva.